Kununurwa kwemaruva emaruva - inogara yakasununguka muMoscow
Mushure mekunge odha yaiswa pane saiti, ruzivo nezve izvi rwunobva rwaenda kunosvitswa sevhisi kana mutengesi wega wega wawakasarudza. Iwe unogona kutarisa padanho ripi iro odha yako iri kushandisa iyo data iri kuaccount yako pawebhusaiti.
Kuendesa muMoscow mahara (mukati memiganhu yeguta). Dhirivhari zvakare yemahara kana ikasapfuura kudarika kutenderera. Kana iye anogamuchira bouquet asiri muMoscow, mutengo webasa unosetwa nechitoro chemaruva kana zvakananga neanotengesa maruva uye zvinoverengerwa otomatiki zvichienderana nenhamba yemakiromita kubva kutenderera kwakatarwa mune fomu reodha. Zvinoenderana nedaro, zvichiteerana.
Iyo nguva iyo iyo bouquet ichaunzwa kwauri kwauri zvinoenderana nekuoma kwebasa uye nemamiriro emigwagwa. Tsananguro yezvinhu zviri panzvimbo iyi inoratidza kuti zvichatora nguva yakareba sei kuendesa iyi bouquet muMoscow. Mushure mekuisa odha yako, unozogashira SMS inotaura kuti odha yakagamuchirwa. Uyezve - kuti odhiyo yakapihwa, uye iwe unogona zvakare kuona pikicha yemabhuru yakapihwa uye pikicha yemugashiri, kana munhu anovimbisa haana kuramba kutora pikicha nemuruva.
Kuongorora nezve salons
Vanofara varidzi vemabouquets